ဘွန်တောဗျို့- ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
hla moe 24 မှ July 14, 2012 2:30pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဓမ္မမိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့ ခင်ဗျာ
တကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့ ညီအကို မောင်နှတွေသံဃာတော်တွေ တချိန်ထဲးတွေ့ ကြပြီး တရားဓမ္မလေးတွေကို
အတ္တမပါကြဘဲး ရင်နှီးစွာ တိုင်းပင် ဆွေးနွေး နေကြတာဟာ မင်္ဂလာဖြစ်စေတာအမှန်ပါ..ထို့ အတူ ဒါန
ဆိုရင်လဲး အတူတကွ လက်တွဲးကြပြီး အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ စာသင်တိုက် (သံဃာ. သီလရှင်) တွေကို
ရှာဖွေပြီးလှူတမ်း နေကြတာဟာလဲး မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကျစေပြီး မင်္ဂလာဖြစ်စေတာ အမှန်ပါ..
ပထမ အကြိမ်အောင်မြင်စွာ လှူတမ်းကြပြီးလို့ဒုတိယခြေလှမ်း စရန်နီးကပ်လာပြီဆိုတာကိုလဲး အသိပေး
စေအပ်ပါတယ်..အခုတကြိမ်လှူတမ်းမှာက သီလရှင် လူမူရေး စာသင်တိုက် ကျောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
တကယ်ဘဲးလိုအပ်ကြပါတယ် သူ့ တို့ မှာကျွန်တော်တို့ လိုစီးပွါးရေး ရှာဖွေလို့ မရကြပါ .သိတတ်ပြီး သဒ္ဒါတရား
ရှိတဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့ မှသာ အဆင်ပြေစေပါတယ်.ဒါတောင် နားလည်ပြီးလှူတဲ့လူရှိမှ စဉ်းစားကြည့်ပါ ကိုအိမ်မှာ
နေတော့ ဆောင်ခေါင်းအုံး အဝတ်အထည် မျိုးစုံလဲး လို့ ရကြပါတယ် သူတို့ မှာကြတော့ များစွာ အခက်အခဲး
ရှိလှပါတယ်ဗျာ.ဒီလိုအလှူကို လှူတမ်းကြတာဟာ အင်မတန်ဘဲး အကျိုးကျေးဇူးများလှပါတယ် သို့ ပါသောကြောင့် နည်းများမဆို ကုသိုလ်ယူ ပါဝင်လှူတမ်း ကြပါလို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်
ဓနရှိလို့ဓနရှင်ပါ..ဒါန ရှိကြလို့ဒါ န ရှင်များလို့ ခေါမယ်...ဒါဆိုရင် သီလရှိကြတဲ့ သီလရှင်တွေကို
အသိတရား ရှိရှိ နဲ့လောင်းလှူကြစို့ လားဗျာ ....အကျိုးမျှောကာ နိုးဆော် လိုက်ပါတယ် ဘွန်တောဗျို့ 
အလှူနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည့်စုံစွာသိရှိလိုပါက အောက်ပါလင့်ကို သွားရောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။
ဘလော့အမျိုးအစား(နှိုးဆော်လွှာ) Like0members like this
မတင်တင်မိုး သည် July 16, 2012 က 12:24pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဓနရှိလို့ဓနရှင်ပါ..ဒါန ရှိကြလို့ဒါ န ရှင်များလို့ ခေါ်မယ်...ဒါဆိုရင် သီလရှိကြတဲ့ သီလရှင်တွေကို
အသိတရား ရှိရှိ နဲ့လောင်းလှူကြစို့ လားဗျာ . ကိုလှမိုး ဘွန်တော ကသဒ္ဓါစိတ်တွေ ယိုဖိတ်စေပါတယ်။ ကလေးတို.ဆရာမ သည် July 15, 2012 က 9:10pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အလှူရေစက် (နည်း-များမဆို) လက်နဲ.မကွာ
တစ်တို.- တစ်စိပ် မဖိတ်- မစင် ၊ သဒ္ဒါ - ရွှင်ပြ
ရှုပါ - ကျင့်ပါ ဝိပဿနာကို
ရက်တိုတိုဖြင့် မျှော်လင့်တောင့်တ နိဗာနသို. - ရောက်ကြမည်ကား အမှန်တည်း--
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ လှိုင်ကျော်ထွေး သည် July 14, 2012 က 8:21pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အစ်ကိုရေ အလှူလင့်ပါ ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်ပါတယ်...။ ဘွန်တောပါခင်ဗျ....။ ဘွန်တောပါ ဗျို့..... စိုးလေး သည် July 14, 2012 က 6:02pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ သာဓု....သာဓု.....သာဓု ကိုလှမိုးရေ။ ကြိုးစားထား။ ဇော်ထက်မောင် သည် July 14, 2012 က 2:42pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:22586...;ဘွန်တောဗျို့....... RSS
ကေခိုင်စိုး ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Top News · Everything မူကြိုဆရာ posted blog posts“သမထနှင်.၀ိပဿနာ”(အားထုတ်ယောဂီများအတွက်အထူး)“သမထနှင်.၀ိပဿနာ”(အားထုတ်ယောဂီများအတွက်အထူး)32 minutes agoကေခိုင်စိုး replied to yamin's discussion 'ဘာသာခြား ဆန့်ကျင်ရေးတရား'"တရားဟောဆရာတော်တစ်ပါးပြောသလိုပါပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေထက်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်ကြ…"1 hour agoKyi Maung commented on အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post 'အရှေ့ကိုလျှောက်ပါတဲ့ အနောက်ကိုတဲ့မျှော်လိုက်ရင်…'"ဖတ်ရှုမှတ်သားရပါ၏။"1 hour agoKyi Maung commented on အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post 'ဘဝရဲ့စိတ်ပျက်ကြေကွဲချိန်မှာ ပြုံးပါ'"ဖတ်ရှုမှတ်သားရပါ၏။"1 hour agoကေခိုင်စိုး commented on အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post '"ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"'"အရှင်ဘုရားပြောတာမှန်ပါတယ်ဘုရား"2 hours agoကေခိုင်စိုး liked အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post '"ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"'2 hours agoကေခိုင်စိုး postedastatus"မြင့်မြတ် ၍အပြစ်ကင်းသောလုပ်ဆောင်ခြင်း"2 hours ago 0
Soe Gyi shared အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post on Facebookမကျေနပ်တဲ့ သံယောဇဉ်3 hours agoSoe Gyi liked အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'မကျေနပ်တဲ့ သံယောဇဉ်'3 hours agoSoe Gyi shared မှတ်ကျောက်'s blog post on Facebookဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ3 hours agoSoe Gyi liked မှတ်ကျောက်'s blog post 'ဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ'3 hours agoဇော်ထက်မောင် leftacomment for မူကြိုဆရာ"အစ်ကိုမူကြိုဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော် လာရောက်လည်ပတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ နေကောင်းကျန်းမာပါစေခင်ဗျ…"4 hours ago More... RSS